कसरी YouTube एल्गोरिथ्म आफ्नो सामग्री दबाउन व्यवहार गर्ने? - YTpals
प्रासंगिकता + निजीकरण = YouTube मा सफलता
गतिशील र कडा YouTube एल्गोरिथ्मसँग व्यवहार गर्नु मार्केटरहरूको लागि केकको टुक्रा होइन। युट्युब, जसले ओभरको प्रयोगकर्ताबेसको आनन्द लिन्छ2अर्ब, पनि छ दोस्रो सबैभन्दा ठूलो खोज इञ्जिन वर्तमान समयमा डिजिटल मिडिया बढ्दै गएको रूपमा मानिसहरूको सूचना आवश्यकताहरू पूरा गर्दै। जस्तै, यसले सम्भावनाहरूलाई आकर्षित गर्न र तिनीहरूलाई वास्तविक ग्राहकहरूमा रूपान्तरण गर्न अपार सम्भावना प्रदान गर्दछ। तर YouTube संलग्नता र दर्शक अन्तरक्रियालाई उच्च लोकप्रियता चिन्हमा पुग्नको लागि ड्राइभ गर्नको लागि तपाईंलाई YouTube एल्गोरिथ्ममा बलियो पकड हुन आवश्यक छ, जुन व्यक्तिगतकरण र सान्दर्भिकताका सिद्धान्तहरूद्वारा निर्देशित छ।
YouTube सँग राम्ररी राखिएको श्रेणीकरण नियमहरू छन् जसद्वारा यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई सान्दर्भिक र व्यक्तिगत भिडियो सामग्री पाँच खण्डहरू अन्तर्गत देखाउँछ: गृह, खोज, प्रचलन, सुझाव गरिएका भिडियोहरू, सूचनाहरू, र सदस्यताहरू। यदि तपाइँ तपाइँको भिडियो सामग्रीलाई YouTube एल्गोरिथ्मसँग पङ्क्तिबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ भने, भिडियो मार्केटिङ प्लेटफर्ममा तपाइँको सफलताको सम्भावना धेरै गुणाले बढ्ने सम्भावना छ।
YouTube एल्गोरिदम संग सामग्री पङ्क्तिबद्ध
त्यहाँ धेरै केसहरू छन् जहाँ YouTube ले भिडियो सामग्रीलाई यी खण्डहरूमा देखा पर्नबाट रोकेको छ किनभने तिनीहरू यसको एल्गोरिदमहरूसँग पङ्क्तिबद्ध छैनन्। यदि तपाइँ तपाइँको भिडियोलाई YouTube एल्गोरिथ्म द्वारा दबाउनबाट रोक्न चाहनुहुन्छ भने, यहाँ केहि द्रुत सुझावहरू छन् जुन तपाइँले जाँच गर्नुपर्छ।
1. संलग्नता सुधार गर्ने सामग्री सिर्जना गर्नुहोस्
यो YouTube संलग्नता ड्राइभ गर्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ, तर यदि तपाइँ प्लेटफर्ममा देख्न चाहनुहुन्छ भने तपाइँ वास्तवमै यसलाई बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न। YouTube एल्गोरिथ्म भनेको मूल्यवान, सान्दर्भिक र व्यक्तिगत सामग्री मानिसहरूलाई ल्याउने बारे हो। यो सामग्रीको कुनै पनि टुक्रा समात्न सम्भव छ जसले दर्शकहरूको अन्तरक्रिया र संलग्नतालाई उजागर गर्दछ। सान्दर्भिक ट्यागहरू र कुञ्जी शव्दहरूसँग भाइरल सामग्री सिर्जना गर्नाले तपाइँको YouTube संलग्नता संख्याहरू बढाउन मद्दत गर्न सक्छ, YouTube लाई तपाइँको सामग्रीलाई संसारको अगाडि हाइलाइट गर्ने कारण दिँदै। संलग्न सामग्रीले मानिसहरूको जीवनमा मूल्य थप्छ - जुन YouTube ले पनि आफ्नो एल्गोरिदम मार्फत हासिल गर्न चाहन्छ। यदि तपाइँ आकर्षक र जानकारीमूलक सामग्री सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भने, तपाइँको भिडियो मार्केटिङ प्रयासहरू निश्चित रूपमा उत्कृष्ट व्यापार परिणामहरूमा प्रकट हुनेछन्।
2. दृश्यताको लागि आफ्नो YouTube च्यानल अप्टिमाइज गर्नुहोस्
YouTube को खोज परिणामहरूमा देखा पर्नको लागि, तपाईंले YouTube एल्गोरिदम देखाउन आवश्यक छ जुन तपाईंले मानिसहरूले खोजिरहेका कुराहरू प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईं आफ्नो च्यानल विवरण र भिडियो शीर्षकहरू मार्फत यो विचार सञ्चार गर्न सक्नुहुन्छ, जुन दुबै महत्त्वपूर्ण घटकहरू हुन्। YouTube SEO। सान्दर्भिक उद्योग-विशेष कुञ्जी शव्दहरू समावेश गरेर आफ्नो च्यानल विवरण—एउटा अनुच्छेद वा दुई- सिर्जना गर्नुहोस्। साथै, तपाईंको भिडियो सामग्रीको शीर्षकहरू 50 देखि 60 वर्णहरू भन्दा बढी हुनु हुँदैन र किवर्डहरू समावेश गर्नुपर्छ। यसले युट्युब एल्गोरिदमलाई तपाईंको च्यानल ट्र्याक गर्न र यसलाई विभिन्न कोटीहरूमा फिचर गर्न मद्दत गर्नेछ। तपाईंको च्यानल जति धेरै अप्टिमाइज गरिएको छ, YouTube खोज परिणामहरूमा देखा पर्ने सम्भावनाहरू त्यति नै बढी हुन्छन्। अन्ततः, यसले तपाईंको CTR लाई धेरै सुधार गर्न सक्छ।
९. एक सुसंगत पोस्टिङ तालिका कायम राख्नुहोस्
सत्य यो हो कि YouTube एल्गोरिदम सक्रिय च्यानलहरूको लागि प्राथमिकता छ। एउटा निष्क्रिय YouTube च्यानल, जहाँ समयतालिका पालना नगरी सामग्री पोस्ट गरिन्छ, प्रायः शीर्षमा चढ्न असफल हुन्छ। प्लेटफर्मले तपाइँको च्यानलमा भिडियोहरूको संख्या र यसको दर्शकहरूलाई देखाउनु अघि पोस्ट गर्ने आवृत्ति दुवैलाई विचार गर्दछ। त्यसोभए, तपाइँको सामग्रीलाई दबाउन YouTube एल्गोरिथ्मसँग व्यवहार गर्ने कुञ्जी पोस्टिङ तालिका सिर्जना र कायम राख्नु हो। यसो गर्नाले तपाईलाई निरन्तर देखिने र सफलताको सम्भावना बढाउनेछ। तपाइँको श्रोता धेरै सक्रिय भएको समयमा सामग्री प्रकाशित गर्न YouTube एनालिटिक्स द्वारा प्रदान गरिएको डेटा पछ्याउनुहोस्।
तपाईंले YouTube मा सामग्री प्रकाशित गर्दा माथि उल्लिखित सुझावहरू निश्चित रूपमा दिमागमा राख्नु पर्छ। YouTube एल्गोरिथ्मले भिडियो सामग्रीलाई दबाउनका कारकहरू बारे सचेत हुनु राम्रो हो। यदि तपाइँ तपाइँको सामग्री मार्फत YouTube संलग्नता र दर्शक अन्तरक्रिया गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने, तपाइँ निश्चित रूपमा तपाइँले चाहेको कर्षण प्राप्त गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। थप YouTube संलग्नता प्राप्त गर्न, तपाईं जस्तै उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ YTPals, जसले तपाईंलाई नि:शुल्क YouTube सदस्यहरू, निःशुल्क YouTube लाईकहरू, र निःशुल्क YouTube टिप्पणीहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
YouTube एल्गोरिथ्मले तपाइँको सामग्रीलाई दबाउनेसँग कसरी व्यवहार गर्ने? YTpals लेखकहरू द्वारा, 14 अप्रिल 2022
YouTube सम्पादनले प्रत्येक मार्केटरलाई बेवास्ता गर्न आवश्यक पर्दछ
विश्वभरका २ अरब भन्दा बढी व्यक्तिले सबै प्रकारका भिडियोहरू हेर्न YouTube प्रयोग गर्छन्। अचम्म मान्नु पर्दैन किन यति धेरै व्यक्तिहरू YouTubers बन्ने भएर विशाल श्रोताहरूको पहुँच लिन चाहन्छन्। जे होस्, भइरहेको…
कसरी YouTube मा एक चन्दा संकलन अभियान चलाउने?
पर्याप्त योजनाबिना काम गरेको खण्डमा अनुदान एक लामो र थकाउने प्रक्रिया हुन सक्छ। तथापि, यो सधैं यस्तो हुँदैन। एक सुनियोजित यूट्यूब कोष स campaign्कलन अभियान आम जनता लाई आकर्षित गर्नेछ र सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईं…
यूट्यूबको मिड-रोल विज्ञापनको बारे यहाँ जान्नुहोस्
यो सामान्य छ कि YouTube लाई प्रभावकारी मार्केटिंगको लागि महत्वपूर्ण प्लेटफर्म हुँदैछ। २ बिलियन भन्दा बढी मासिक सक्रिय प्रयोगकर्ताहरूको साथ, युट्युब आफ्नो मूल कम्पनी गुगल पछि दोस्रो सबैभन्दा लोकप्रिय खोज इन्जिन भएको छ। सफलता प्राप्त गर्दै ...